အမြဲတစ်သက် ဆုပ်ကိုင်ထားမယ့် လက်။
ကမ္ဘာမြေကိုပွေ့ဖက် သန့်စင်တဲ့လက်များ တို့ လိုအပ်တယ်…
ငြိမ်းချမ်းရေးကို တပ်မက် သန့်စင်တဲ့လက်များ တို့ လိုအပ်တယ်…
အမှန်တရားနဲ့ လက်ဆက် သန့်စင်တဲ့လက်များ တို့ လိုအပ်တယ်…
တော်လှန်ရေးအတွက် ပွဲထွက် ကလစ်ကူမယ့်လက်များ တို့ လိုအပ်တယ်။
The Sea လောက် ကျယ်ကျယ်
ပေးရင်လည်း ဝေဖြာမှ လှတယ်…
တလက်လက်ထ တောက်ပနေတဲ့လက်တွေ သန့်စင်ခိုင်မာသွားကြပေရဲ့။
ဟိုလူ သည်လူ အရေးတူတဲ့ ငါတို့လက်တွေ…
Chu Zim December 15, 2021 at 9:05 PM
လေးကေ့ကော် မှာ ခွေးတွေက " ကယ်ပါ " တို့ " ရပ်ပါ " တို့ အော်နေတော့ ကယား (ကရင်နီ) ဘက်က မြေပြင် အခြေနေတွေအကြောင်းလည်း ပြန်တွေးမိတယ်။
ပြည်သူ့တပ်တွေ ဝိုင်းဖြုတ်ကြလို့ မြောင်းထဲကနေ " မင်းတို့ မတော် နိုင်ကြဘူးလားကွာ " လို့ အော် တာတွေ . .
ဒဏ်ရာရနေတဲ့ခွေးကို တခြားခွေးတွေ ထမ်းပြီး ပြေးနေရတာတွေ . .
ခွေးအုပ်ကြီးထဲကို RPG ကျည်ဆံ အုံးခနဲ ဝင်သွားလို့ ကားခနဲ လွှင့်ကုန်တာတွေ . .
အကောင် ၈၀ ကျော် တစ်နေ့တည်း ကျတာတွေ . .
ခွေး ခေါင်းဆောင် ပုံလှဲကျသွားလို့ ခွေးတွေ ပြာယာခတ်နေကြတာတွေ . .
ညဘက်မှ အသက်မဲ့ ခွေးခန္ဓာတွေကို ခိုးထမ်းပြီး ဆုတ်ပြေးရတာတွေ . .
တစ်ပွဲတည်းမှာတင် sniper နဲ့ ခွေး ၁၅ ကောင်ကျော် ရှော့ထည့်လိုက်တာ ပြည်သူ့တပ်သားတစ်ယောက် . . ။ သူပစ်တဲ့ sniper သံ သူ မခံနိုင်လို့ နားထဲက ပြည် တောင် ယိုတယ်။ နားက ပြည် ယိုနေပေမယ့် အသံတွေက လန်းဆန်းပြီး တောက်ပ နေတာ။ အရသာရှိလ်ိုက်တာကွာ ဆိုတဲ့စကားကို ထပ်ခါ ထပ်ခါ ပြောနေတယ်။ မျက်လုံးတွေက မုန့်စားရတဲ့ခလေးလို တက်ကြွနေတာ။
ဒါတွေက ဖြစ်ရပ်မှန်အစစ်တွေပါ။ ကိုယ့်ဘက်က လက်စောင်း ထက် လို့ နိုင်တဲ့ပွဲတွေပါ။
ဆိုပေမယ့် ပေးဆပ်ရမှုလည်း သိပ်များပါတယ်။
အိမ်တွေ စွန့်ခွါရတယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှု တွေမီးရှို့ခံရတယ်။ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ နှိပ်စက်ခံရတယ်။ အရှင်းခံရတယ်။
ရှေ့တန်းမှာဆိုလည်း ဒဏ်ရာရတဲ့ရဲဘော်တွေ ရှိတာပဲ။ ကျဆုံးရတဲ့ရဲဘော်တွေ ရှိတာပဲ။ အားလုံးက အကုန် ပုံအပ်ပြီး ရင်းကြရတာ။
စစ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ နောက်ကနေ လိုက်ပြီး လုပ်ရတာတွေ ရွေ့ရတာတွေ ဘဝတွေ လူတွေ အများကြီး ပြင်ဆင်ထုတ်ပိုးထွက်ပြေးရတာတွေဟာ နည်းတဲ့ ပေးဆပ်မှု တွေမဟုတ်ဘူး။
အိမ်မှာ အေးဆေးနေနိုင်တဲ့သူတွေက များများ click မှ ရမယ်။ များများ လှူမှ ရမယ်။ များများ ကူညီမှ ရမယ်။ အကျီအသစ် ဝယ်ဖို့က ၁ သောင်းဆို ၅ ထောင်ကို လှူပစ်လိုက်ပါ။ ဖုန်းအသစ်ဝယ်ဖို့ ၁၅ သိန်းကျရင် ၅ သိန်းလောက်တော့ လှူလိုက်ပါ။ your brand new mobile phone can waitafew more days !
အောင်ပွဲက ချိုမြိန်ပေမယ့် သွားတဲ့လမ်းက အရမ်း ကြမ်းတမ်းတယ်။ ဒါလေး မမေ့အပ်ဖို့ပါ။
crd-Mauk Kham Wah
San Zuren December 15, 2021 at 10:27 PM
ပြီးရင် ဘာကိုမှ လှည့်မကြည့်ပဲ
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ December 28, 2021 at 4:33 AM
Unknown January 7, 2022 at 1:21 AM
ဒီနေ့နောက်ကျသွားတယ် သားလေးနှာပိတ်ပီးတညလုံးမအိပ်လို့ပါ ည၁၂ထိုးတဲ့ထိ အတိုးနဲ့ click ပါ့မယ်
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ January 7, 2022 at 3:28 AM
Fighting mommy 💗💪
MONEY January 7, 2022 at 9:26 PM
အင်း စာနာစိတ်မရှိရင်တောင် တာဝန်သိစိတ်နဲ့ကူမဲ့လက်တစ်စုံပဲလိုတာပါ
Nyi Nyi January 13, 2022 at 6:47 AM
Unknown January 13, 2022 at 4:22 PM
မင်ယွန်းဂီရဲ့ကောင်မလေးမင်ယွန်းဂီရဲ့ကောင်မလေး January 13, 2022 at 7:40 PM
Unknown January 13, 2022 at 8:03 PM
Myo Myat Nway Oo December 15, 2021 at 9:59 PM
Man Lun December 15, 2021 at 11:26 PM
စိတ်တွေ ညီညာစွာ စည်းလုံးဖို့
Sammi December 16, 2021 at 1:30 AM
Sammi January 13, 2022 at 7:16 AM
Zin Mar Htwe December 16, 2021 at 2:23 AM
wunna December 16, 2021 at 4:15 AM
Thanks January 13, 2022 at 5:57 AM
Mon mon December 16, 2021 at 8:42 AM
Yamin December 16, 2021 at 10:38 PM
Swe Zin Mar December 17, 2021 at 5:40 AM
Let us walk toward our goal
Kan December 17, 2021 at 9:32 PM
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ December 28, 2021 at 4:35 AM
Dar Dar December 18, 2021 at 6:18 AM
Dar Dar December 18, 2021 at 6:37 AM
ZAR2Oo December 18, 2021 at 7:04 AM
We must participate good matter.
KhantGyi December 18, 2021 at 7:46 AM
လက်ကိုခဏခဏဆေးပါ .. 🙃😅😅
Moethar December 18, 2021 at 8:59 AM
ဖြူစင်ခြင်း သင်္ကေတကိုအဖြူရောင်နဲ့ ဖော်ပြသလို ..
အဖြူရောင် ကြယ်လေးများရဲ့ ဖြူစင်ခြင်းလက်
Man Lun December 18, 2021 at 8:30 PM
Nilar December 18, 2021 at 10:40 PM
khoon aoune December 19, 2021 at 2:59 AM
ဆု December 19, 2021 at 8:06 AM
Sunshine 💦 December 19, 2021 at 9:20 AM
Chaw Ei Ei Hlaing December 19, 2021 at 7:40 PM
Naing Win December 19, 2021 at 8:24 PM
Aye Kyaing December 19, 2021 at 9:55 PM
Aye Zaw Thu December 19, 2021 at 10:44 PM
Mon mon December 20, 2021 at 1:31 AM
Man Lun December 20, 2021 at 4:24 AM
aungwinthet December 20, 2021 at 8:06 AM
Bo kyaw December 20, 2021 at 8:46 PM
Unknown December 23, 2021 at 4:32 AM
Click to glory
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ December 28, 2021 at 4:36 AM
Phoenixတွေ အိမ်ပြန်လမ်းမှာ စောင့်ကြိုမယ့်လက်များ....✊
Sammi January 2, 2022 at 10:50 PM
hoyfound January 6, 2022 at 7:49 PM
Unknown January 6, 2022 at 7:53 PM
Click everyday clickers
Su Thae Swe January 6, 2022 at 7:54 PM
Fighting fighting 💪💪💪
ZawZawHtet January 6, 2022 at 7:55 PM
Unknown January 6, 2022 at 7:55 PM
Shall we change our rancours to the power of revolution.
Unknown January 6, 2022 at 7:58 PM
Unknown January 6, 2022 at 7:59 PM
Shauktawthar January 6, 2022 at 7:59 PM
Tin Win YTS January 6, 2022 at 8:02 PM
Lwin Lwin January 6, 2022 at 8:05 PM
nyi hmue thwin January 6, 2022 at 8:13 PM
Myate January 6, 2022 at 8:18 PM
pu tue January 6, 2022 at 8:19 PM
Myate January 6, 2022 at 8:19 PM
TAVOYAN January 6, 2022 at 8:21 PM
卂ㄩ几Ꮆ Ҝㄚ卂山 Ҝㄚ卂山 January 6, 2022 at 8:26 PM
Daw Thwe Thwe Hlaing January 6, 2022 at 8:41 PM
Chester Alex January 6, 2022 at 8:44 PM
ခမာက စောက်ရူးကောင် ရောက်နေပြီ..ဆိုလိုတာက သံတမန်ရေးရာမှာ NUG ကို တထစ်ချအားကိုးလို့မရသေးဘူးဆိုတာပဲ .. ဒီတော့ ကိုယ်လုပ်မှကိုယ်ရမယ် သံတမန်ရေးရာကို အားကိုးမယ့်အစား တကယ်တိုက်နိုင်တဲ့ PDF လေးတွေဆီတိုက်ရိုက်ရောက်တဲ့ ငွေကြေးတွေရဖို့အတွက် များများCLICKဖို့လိုတယ် ..
Ma Ei Ei January 6, 2022 at 8:58 PM
Unknown January 6, 2022 at 9:09 PM
M January 6, 2022 at 9:13 PM
M January 7, 2022 at 2:43 AM
Hein Htet Naung January 6, 2022 at 9:14 PM
Dar Dar January 6, 2022 at 9:15 PM
Thein Soe January 6, 2022 at 9:17 PM
War War Hlaing January 6, 2022 at 9:25 PM
nyi hmue thwin January 6, 2022 at 9:28 PM
Mpt ,or telenor,. Ooredoo?
Love page January 6, 2022 at 9:29 PM
GZ တွေရဲ့ လက်
PDF တွေရဲ့ လက်
zaw ko htet January 6, 2022 at 9:44 PM
Unknown January 6, 2022 at 9:47 PM
ရွှေလက် က လေးများ နှိပ် နှိပ်နှိပ်
Unknown January 6, 2022 at 9:55 PM
Unknown January 6, 2022 at 10:05 PM
khoon aoune January 6, 2022 at 10:06 PM
Naing ko January 6, 2022 at 10:15 PM
Unknown January 6, 2022 at 10:21 PM
Thi Ha Aung January 6, 2022 at 10:29 PM
Unknown January 6, 2022 at 10:31 PM
သတင်းဝင်မဖတ်ပဲ ညာဘက်ထောင့်က video သင်္ကေတ‌လေးပဲ နှိပ်ပြီးကြော်ငြာပဲ ကြည့်ရင် click တာနဲ့တူပါသလား။ သတင်းဝင်ဖတ်ပြီး ပြန်ထွက်ရင် ကြော်ငြာ မလာလို့ပါ။‌ သိတဲ့သူများဖြေပေးပါ please
Unknown January 7, 2022 at 2:41 AM
Myo January 6, 2022 at 10:34 PM
ငါတို့တွေ နိုင်ကိုနိုင်ရမယ် 😊
Unknown January 6, 2022 at 10:47 PM
Unknown January 6, 2022 at 10:48 PM
Aung Myint Than January 6, 2022 at 10:56 PM
We are CLICKERS for our PEOPLES Revolution.
Unknown January 6, 2022 at 11:17 PM
Moe nay January 6, 2022 at 11:22 PM
I ♥️ all clickers!
Unknown January 6, 2022 at 11:23 PM
မအလ = ဟြန္ဆန္
Unknown January 6, 2022 at 11:29 PM
မအလ မင္းေအာင္လိႈင္ = မအလ ဟြန္ဆမ္
January January 6, 2022 at 11:37 PM
Freya Phyo January 6, 2022 at 11:40 PM
Lady Su January 6, 2022 at 11:42 PM
ဖေးလို့မ တဲ့ လက်
Unknown January 6, 2022 at 11:48 PM
World Wide January 6, 2022 at 11:49 PM
naychi January 6, 2022 at 11:57 PM
Than Than January 7, 2022 at 12:07 AM
Unknown January 7, 2022 at 12:35 AM
tkhantmaun January 7, 2022 at 12:38 AM
Capt Ye Thu January 7, 2022 at 12:45 AM
Unknown January 7, 2022 at 1:11 AM
Htêt Wai Aung January 7, 2022 at 1:36 AM
Unknown January 7, 2022 at 1:48 AM
Hla Hla Nue January 7, 2022 at 1:52 AM
Clicking with fighting
Fighting with clicking
MML January 7, 2022 at 2:14 AM
Unknown January 7, 2022 at 2:15 AM
Kaung Myat Hein January 7, 2022 at 2:33 AM
ကိုမောင် January 7, 2022 at 2:33 AM
Khaing Swe Mar January 7, 2022 at 2:40 AM
Shoon Lai Myintzu January 7, 2022 at 2:51 AM
Shwe Nyaung January 7, 2022 at 3:10 AM
Chittoo January 7, 2022 at 3:11 AM
AUNG January 7, 2022 at 3:22 AM
December January 7, 2022 at 3:24 AM
မနေ့က ကလစ်တာ5 blogs ဘဲရတယ် များအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ January 7, 2022 at 3:30 AM
PaPaWaDe January 7, 2022 at 3:43 AM
Thet Wai January 7, 2022 at 4:20 AM
Raj January 7, 2022 at 4:31 AM
Unknown January 7, 2022 at 4:41 AM
Wah Wah January 7, 2022 at 5:53 AM
သန့်စင်တဲ့လက် ကလစ်ကူမဲ့လက် တွဲလက်တွေမြဲမဲ့လက်💪💪💜💜
Kyaw1972 January 7, 2022 at 6:08 AM
Aung January 7, 2022 at 7:11 AM
Unknown January 7, 2022 at 7:50 AM
Wu Yi Fan January 7, 2022 at 8:48 AM
Unknown January 7, 2022 at 9:20 AM
ArrD January 7, 2022 at 9:43 AM
ko Thet January 7, 2022 at 5:54 PM
TKT January 7, 2022 at 6:33 PM
Unknown January 7, 2022 at 7:32 PM
Unknown January 8, 2022 at 12:53 AM
ဒီတော်လှန်ရေးမှာ ငါလည်းပါဝင်ဖူးပြီ၊အောင်ပွဲရပြီးရင် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအသီးအပွင့်တွေ ဝေဆာနေတဲ့ သစ်ပင်ကြီးကို ပီတိများနဲ့ ငေးကြည့်နေမယ်။(အုတ်တချပ်သဲတစ်ပွင့်)
Unknown January 8, 2022 at 1:02 AM
အမှန်တရားကို ရ ရင်ရ ပြန်မရရင် အဆုံးထိသွားမှာပါ
Unknown January 8, 2022 at 4:14 AM
We are clickers ♥♥♥♥♥♥
Unknown January 8, 2022 at 4:46 PM
Zin Ko Lwin January 8, 2022 at 6:23 PM
MK January 9, 2022 at 5:33 PM
က​လေး January 12, 2022 at 12:11 AM
အချစ်တွေနဲ့ ကလစ်ပါတယ်။ တို့ မောင်နှမတွေ လက်တွဲထားကြမယ်နော်။
Aung Nyi January 13, 2022 at 5:29 AM
Unknown January 13, 2022 at 5:41 AM
Thi Thi Win January 13, 2022 at 5:52 AM
Chit Ya Aung January 13, 2022 at 5:57 AM
ကျနော်တို့ကိုအဓိကထောက်ပံ့နေတဲ့ကျေးရွာလေးပတ်ပြေးနေရပြီ😥😥 သူတို့ပြန်လည်ထောက်ပံ့ဖို့အလှူခံချင်ပါတယ်။ အဆင်ပြေသူများလှူပေးကြပါဦး👏👏👏
ကျနော့် wave accountနံပါတ်ပါ 👇
09 966 525 909
ကျနော့် Gmail accountပါ👇
Ko Phyo January 13, 2022 at 6:04 AM
Unknown January 13, 2022 at 6:08 AM
Unknown January 13, 2022 at 6:13 AM
Unknown January 13, 2022 at 6:15 AM
angelkhine January 13, 2022 at 6:18 AM
helping hand 💗
Unknown January 13, 2022 at 6:18 AM
Unknown January 13, 2022 at 6:29 AM
Unknown January 13, 2022 at 6:31 AM
W W Lwin January 13, 2022 at 6:36 AM
တော်လှန်ရေး ညီအကို မောင်နှမများခဗျာ
ကိုယ်ဘာလုပ်နေလည်း အခြားသူများ အသိပေးခြင်း သတိပြုကြစေချင်ပါတယ်
Ye Min Naing January 13, 2022 at 6:47 AM
Unknown January 13, 2022 at 6:52 AM
Unknown January 13, 2022 at 7:10 AM
အောင်လံထူ မယ့် လက်
မလျှော့သော ဇွဲ တွေနဲ့ ဆက် Click ကြမယ့် လက်
Unknown January 13, 2022 at 7:22 AM
Kyaw mae yaung January 13, 2022 at 7:27 AM
I am fa. ကျော်မဲရောင်is my fb acc. 17old😁😁😁
Unknown January 13, 2022 at 7:36 AM
Good night all clicker ❣️💪
sweswe January 13, 2022 at 7:52 AM
MML January 13, 2022 at 7:53 AM
Su Su January 13, 2022 at 7:54 AM
Myint Zu January 13, 2022 at 8:01 AM
Khant Min January 13, 2022 at 8:45 AM
Unknown January 13, 2022 at 9:35 AM
Unknown January 13, 2022 at 10:20 AM
Unknown January 13, 2022 at 10:35 AM
AHl January 13, 2022 at 10:45 AM
Myate January 13, 2022 at 11:47 AM
ko Thet January 13, 2022 at 4:45 PM
Naw Karen January 13, 2022 at 6:09 PM
Daw Su Su Htway January 13, 2022 at 7:06 PM
Daw Su Su Htway January 13, 2022 at 7:08 PM
Daw Su Su Htway January 13, 2022 at 7:29 PM
Daw Su Su Htway January 13, 2022 at 7:30 PM
Daw Su Su Htway January 13, 2022 at 7:31 PM
Daw Su Su Htway January 13, 2022 at 7:32 PM
Daw Su Su Htway January 13, 2022 at 7:34 PM
Daw Su Su Htway January 13, 2022 at 7:35 PM
Daw Su Su Htway January 13, 2022 at 7:37 PM
Unknown January 13, 2022 at 7:44 PM
TAVOYAN January 13, 2022 at 7:56 PM
Daw Su Su Htway January 13, 2022 at 7:57 PM
Unknown January 13, 2022 at 7:59 PM
Unity is successful.
Min min January 13, 2022 at 8:59 PM
Dr.Win Htun January 13, 2022 at 9:19 PM
Unknown January 13, 2022 at 10:08 PM